I-LocalVox: Intengiso yeKhaya neNtengiso encinci Martech Zone
I-LocalVox: UkuThengisa kweShishini laseKhaya kunye naMancinci
NgoLwesihlanu, Novemba 15, 2013 NgoLwesihlanu, Novemba 15, 2013 Douglas Karr
Kukho ngaphezulu kwe-100 yezigidi zophendlo lwasekhaya ngosuku kwaye i-88% yazo iyatsalela umnxeba okanye iya kolo hlobo lweshishini ngaphakathi kweeyure ezingama-24! LocalVox liqonga lentengiso lasekhaya, elokuhlala kunye nelishukumayo elinceda amashishini endawo ukuba azithengise kwi-Intanethi, kwinethiwekhi yabapapashi, imidiya yoluntu, ukukhangela, iselfowuni, iincwadana zeendaba ze-imeyile kunye newebhusayithi yazo- kwaye kulula ukuyisebenzisa njenge-imeyile.
LocalVoxIndibaniselwano yetekhnoloji kunye nenkxaso igqibelele kumashishini amancinci afuna ukuvula ixabiso lentengiso yasekhaya. Iimpawu zibandakanya:
uqhagamshelwano -Yenza kube lula ukunxibelelana nabathengi bakho abakhoyo nge-imeyile, imidiya yoluntu kunye neselfowuni- konke ngokutyhala iqhosha elinye.
SEO lwengingqi -Kukunceda ukuba ufumaneke ngabathengi abatsha ngokwandisa indlela obala ngayo kuGoogle, kuGoogle + kunye namakhulu ezalathiso zasekhaya ezinje ngeYelp, iSixeko sokuKhangela, iYahoo, iBing nokunye.
mobile -Yenza iwebhusayithi ephathekayo kwaye ipapashe uhlaziyo kwiwebhusayithi yakho ngokuzenzekelayo ukunceda ukuguqula abathengi abatsha kwaye unike abathengi abakhoyo isizathu sokuba babuye.
Ulawulo lweSifa -Zijonge ngokuzenzekelayo igama lakho lentlalontle ukuze ufumane i-imeyile ngalo naliphi na ixesha ofuna ukuphendula ngalo ku-Yelp okanye kwiSixeko sokuKhangela uphononongo, uluvo lwe-Facebook okanye impendulo ye-Twitter.
Deals -Qhuba abathengi abatsha ngokujolisa kubantu abakufutshane kwiifowuni eziphathwayo kunye nezibonelelo apho ugcine yonke ingeniso.
Ukubika -Ukubonelela ngeengxelo zenyanga nenyanga onokuthi uziqonde ngeemetrikhi ezithetha ishishini.
Fumana Ingxelo yasimahla ye-SEO yeNgingqi evela kwi-LocalVox kwaye ufumane apho ishishini lakho lingafumanekiyo!
tags: Uhlalutyoemail Marketingyendawo seourhwebo mobilekwiintengiso onlineSocial Media Marketing
Ongage: Guqula abathengisi be-imeyile ngaphandle kokutshintsha i-UI yakho!
USeth Godin akalunganga ngamanani
Mar 31, 2016 ngo-3: 38 AM
Yonke intle kakhulu, kodwa bendifuna ukwazi ngakumbi malunga "nonxibelelwano".